१५ ओटा म्युचुअल फण्डको प्रतिइकाई खुद सम्पत्तिको मूल्यमा वृद्धि
साउन २०, काठमाडौं । असार मसान्तसम्ममा सूचीकृत १५ ओटा म्युचुअल फण्डको प्रतिइकाई खुद मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।
ती योजनाहरुले शेयर बजारमा गरेको लगानीको बजार मूल्य बढेसँगै प्रतिइकाई खुद मूल्यमा वृद्धि भएको हो । असार मसान्तसम्ममा १५ओटा योजनाले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी प्रतिइकाई खुद सम्पत्तिको मूल्य एनआईसि एशिया ग्रोथ फण्डको रू. ११ दशमलव ७५ पुगेको छ । यो मूल्य जेठ मसान्त सम्ममा रू. १० दशमलव ८१ थियो । उक्त योजनाले असार मसान्त सम्ममा रू. १४ करोड ५१ लाख नाफा कमाएको हो ।
जेठ मसान्तसम्मको तुलनामा ११८ दशमलव ५५ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । यस योजनाले असार महिनामा शेयर बजारमा गरेको लगानीको बजार मूल्यमा वृद्धि भएकाले नाफा सँगै प्रतिइकाई खुद मूल्यमा वृद्धि भएको हो ।
१५ ओटामध्ये १३ ओटा योजनाको नाफा बढेको छ भने दुई योजना नोक्सानीमा रहेका छन् । ग्लोबल आइएमई समुन्नत– १ र लक्ष्मी इक्विटी फण्ड नोक्सानीमा रहेका छन् । असार मसान्तसम्ममा ग्लोबल आईएमई समुन्नत– १ले रू. २ करोड ५१ लाख नोक्सानी व्यहोरेको छ ।
जेठ मसान्तसम्मको तुलनामा असार मसान्तमा भने नोक्सानी कम भएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा उक्त योजना रू. १८ करोड ५ लाख नोक्सानीमा थियो । त्यसैगरी लक्ष्मी इक्विटी फण्डले असार मसान्तसम्ममा रू. ३ करोड ४२ लाख नोक्सानी व्यहोरेको छ ।
असार मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी नाफा सानिमा इक्विटी फण्डको वृद्धि भएको छ । उक्त योजनाको नाफा जेठ मसान्तको तुलनामा १६ दशमलव ७३ गुणाले वृद्धि भएको छ । जेठ
मसान्तमसान्तसम्म उक्त योजनाले रू. १ करोड ५ लाख नाफा गरेकोमा असार मसान्तमा रू. १७ करोड ६५ लाख पुगेको छ । असार मसान्तसम्ममा उक्त योजनाको आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो ।